श्रीमान दुवईमा, नेपालमा कोठामा भेटियो श्रीमतीको शव - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार श्रीमान दुवईमा, नेपालमा कोठामा भेटियो श्रीमतीको शव
आजभोली महिलाहरुको रहस्यमय निधनले समाज र परिवारलाई चिन्तित बनाएको छ । फेरी मोरङको सुन्दरहरैँचा–८ सलकपुरमा एक युवतीको शव कोठाभित्र फेला परेको छ । उनी विवाहिता हुन् । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि दुवईमा छन् । आइतबार बिहान ७ बजेतिर कोठाभित्र उनको शव फेला परेको हो । ढोकामा चुकुर लगाएको छ । ति युवती स्थानीय २४ वर्षीया रोजिना गिरी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
Previous articleविवाहित महिलाको लागि ‘मिसेस नेपाल वर्ल्ड’ आयोजना हुँदै
Next articleबलिउड अभिनेत्री पायल घोषमाथि मुम्बइमा एसिड आक्रमणको प्रयास